Web3သည် အကြာကြီးတိုက်ခိုက်ရကျိုးနပ်သည်။ - Token Myanmar
အာရုံအားလုံးဖြင့်- နှင့် ကွဲလွဲသော ဆွေးနွေးမှုများ – ဤလွန်ခဲ့သည့်လတွင် Web3ဝန်းကျင်တွင် တတိယ၊ ပိုမိုဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုရှိသော အင်တာနက်ခေတ်၏ အယူအဆသည် လုံးဝအသစ်ဖြစ်သည်ဟု သင်ထင်ကောင်းထင်နိုင်သည်။
အမှန်မှာ၊ “Web 3.0” သည် Google နှင့် Facebook ကဲ့သို့သော အင်တာနက်ပလပ်ဖောင်းကြီးများနှင့် Web 2.0 ၏ ဒေတာသက်ရောက်မှုများအကြောင်းနှင့် Web 2.0 ၏ အပျက်သဘောဆောင်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ဖန်တီးထားသော လူမှု၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် နိုင်ငံရေး ကွဲလွဲမှုများအကြောင်း၊ စီးပွားရေးကို တွန်းအားပေးသည်။ ၎င်းသည် Ethereum နှင့် Polkadot ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Gavin Wood မှ ဦးဆောင်ခဲ့သည့် Web3၏ နောက်ဆုံးပေါ် crypto-based ထပ်ခြင်း၏ ရှေ့တွင် ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က CoinDesk မှပြန်လည်ထုတ်ဝေခဲ့သော 2014 ဘလော့ဂ်ပို့စ်.
မင်းစာဖတ်နေတယ်။ ငွေကို ပြန်လည် စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့သည်။ငွေကြေးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပြီးကမ္ဘာ့ဘဏ္ဍာရေးစနစ်ကိုပြောင်းလဲစေသည့်နည်းပညာ၊ စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းများကိုအပတ်စဉ်ကြည့်ရှုပါ။ သတင်းလွှာအပြည့်အစုံကို ရယူရန် စာရင်းသွင်းပါ။ ဒီမှာ.
ဤပြင်းထန်သော ဆွေးနွေးပွဲတွင် နှစ်ဖက်စလုံးမှ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော အမြင်ရှိသည်။ အဲဒီမှာ Chris Dixon ရာထူး Web3ပရောဂျက်များသည် တကယ့်တန်ဖိုးနှင့် တန်ပြန်မှုကို ဖန်တီးနေပါသည်။ Jack Dorsey ရာထူး ယင်းအသုံးအနှုန်းသည် ၎င်းတို့၏ရှယ်ယာများနှင့် တိုကင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် အကျိုးတူအရင်းရှင်များက အမြတ်ထုတ်သည့် buzzword တစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။
နာမည်ကြီး “Tims” နှစ်ခု (အောက်တွင် ဆွေးနွေးထားသည်) အပါအဝင် စမတ်ကျသူများသည် Web3ပရောဂျက်များတွင် ထိုက်တန်သော ရည်မှန်းချက်များရှိပြီး အောင်မြင်ပါက အများသူငှာ အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း အကြံပြုထားသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ဤရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းသည် အလွန်ကြီးမားသောပြဿနာတစ်ရပ်ကို ဖြေရှင်းရန်ခက်ခဲကြောင်းနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် ဆားတစ်စေ့ဖြင့် ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောကတိများကို ရယူရန် ပညာရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အား သတိပေးသည်။
ဤရာထူးနှစ်ခုအနက်မှ သင်ကိုင်ဆောင်ထားနိုင်သည့် ထင်မြင်ယူဆချက်ကို ဘေးဖယ်ထားခြင်းဖြင့် Web 2.0 ၏ အဓိကဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို အာရုံစိုက်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကို ပြောင်းလဲရန် အဘယ်ကြောင့် လိုအပ်သနည်း။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် Web3တိုးတက်မှုအတွက် ကြွေးကြော်နေသည့် အခြေခံပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်သည်- အင်တာနက်ကို လွှမ်းမိုးထားသည့် ကုမ္ပဏီကြီးများ၏ အကျိုးစီးပွားနှင့် အများသူငှာ အကျိုးစီးပွားများကြား မှားယွင်းနေခြင်းဖြစ်သည်။
Blockchain နည်းပညာသည် ၎င်းကိုဖြေရှင်းရန် ကူညီပေးနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် ဖြေရှင်းချက်၏တစ်ခုတည်းသောအစိတ်အပိုင်း သို့မဟုတ် အရေးအကြီးဆုံးအပိုင်းဖြစ်သည်ဟု မဆိုလိုပါ။ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အများသူငှာ အကျိုးစီးပွားများကို ပြိုင်ဆိုင်စေမည့် စီးပွားရေးပုံစံများကို ဖွင့်ပေးနိုင်ရန် (ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု လျှော့ချခြင်းနှင့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု) ရောနှောထားသော နည်းပညာများ လိုအပ်ပါသည်။
သို့သော် ဦးစွာ၊ ကျွန်ုပ်တို့ ဤနေရာသို့ မည်သို့ရောက်ရှိသနည်းဟူသော မေးခွန်းသည် Web3၏ ရှည်လျားသော သမိုင်းကြောင်းကို ကြည့်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
Web3သည် 'Web 2.0 မဟုတ်' ဟုဆိုလိုသည်
Web3သည် Web 2.0 နှင့် ၎င်း၏ လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုပြဿနာများကို လူ့အဖွဲ့အစည်းမှ လွတ်ကင်းရန် လိုအပ်သည့် အယူအဆမှ သဘောတရားအရ ခွဲခြား၍မရပေ။ အချိန်အတော်ကြာအောင်၊ Web3သည် "Web 2.0 ပြီးနောက် လာမည့် မော်ဒယ်" ကို အမှန်တကယ် အဓိပ္ပါယ်ရှိစေပါသည်။
ဆရာ Tim Berners-Lee အဆိုအရ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် အဆင့်မြှင့်တင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း အချက်ပြခဲ့သည်။ နာမည်ကြီး နည်းပညာထုတ်ဝေသူ Tim O'Reilly ၏ မကြာသေးမီက ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် – ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဝဘ်ကို တီထွင်သူသည် ၎င်း၏ ရေရှည်မျှော်မှန်းချက်အသစ်ကို ဖော်ပြရန်အတွက် "Web 3.0" ဟူသော ဝေါဟာရကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ "အသုံးအနှုန်းဝဘ်” Berners-Lee သည် စစ်မှန်သော "machine-to-machine" ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ကို ခွင့်ပြုရန် တတိယအဖွဲ့အစည်းများမှ ကြားခံဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်မှုကို ဖယ်ရှားပေးသည့် universal data formats နှင့် artificial intelligence တို့၏ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုကို တွေ့မြင်ခဲ့သည်။
Berners-Lee သည် “Web 3.0” ကို အမှန်တကယ် ဖန်တီးထားခြင်း ရှိ၊ မရှိ မရှင်းလင်းပါ။ (တစ်ခုမှကိုးကား 2006 New York Times ဆောင်းပါး O'Reilly ၏ကော်လံတွင် ချိတ်ဆက်ထားသော ဒဏ္ဍာရီလာကွန်ပြူတာသိပ္ပံပညာရှင်က "Web 3.0 က ဘာလဲဆိုတာ လူတွေက ဆက်ပြီးမေးနေကြတယ်" လို့ တခြားသူတွေက သူ့ရှေ့မှာပြောခဲ့ဖူးတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို အကြံပြုထားပါတယ်။) O'Reilly ကိုယ်တိုင်က "Web 2.0" ဟူသော ဝေါဟာရကို စတင်ဖန်တီးခဲ့သည့် အယူအဆမှာ အငြင်းပွားမှုနည်းပါးသည်။ ” ဟူသော အယူအဆကို မရှင်းပြမီ 2004 ခုနှစ် ကွန်ဖရင့်ကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သြဇာကြီးမားသော ၂၀၀၅ ခုနှစ် စာစီစာကုံး.
2004 ခုနှစ်တွင် Google၊ Facebook နှင့် Amazon တို့သည် ကိုးဆယ်ကျော်နှောင်းပိုင်းမှ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများအဖြစ် လူသိများခဲ့သည်။ ဒေါ့ကွန်း bubble – တန်ဖိုးရှိသော အစဉ်အဆက်ကြီးထွားနေသော လူ့အဖွဲ့အစည်းများအတွင်း ကြီးမားသော စျေးကွက်စွမ်းအားကို စုစည်းထားသည်။ O'Reilly သည် ၎င်းတို့၏လွှမ်းမိုးမှုကို ဖော်ဆောင်ပေးသည့် ကွန်ရက်သက်ရောက်မှု-မောင်းနှင်သည့် စီးပွားရေးပုံစံသစ်ကို အမည်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်- ကြီးထွားလာမှုသည် ကြော်ငြာရှင်များအတွက် ဟန်နီအိုးဖန်တီးရန် သုံးစွဲသူများကိုယ်တိုင် ဆွဲဆောင်နိုင်သည့် ဘုံပလပ်ဖောင်းတစ်ခုပေါ်တွင် အမြဲတစေ တိုးပွားနေသော သုံးစွဲသူအများအပြားဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အားကောင်းသည့် ကြားခံများ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းမှာ ထုတ်ဝေသူများနှင့် အသုံးပြုသူများ အချင်းချင်း တိုက်ရိုက်၊ ခွင့်ပြုချက်မဲ့ ဝင်ရောက်ခွင့် ရရှိရန် မျှော်လင့်ထားသည့် အင်တာနက်၏ မူလဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု လျှော့ချထားသော အယူအဆမှ သိသိသာသာ ထွက်ခွာသွားခြင်း ဖြစ်သည်။
ပလက်ဖောင်းများ၏ အောင်မြင်မှု အရင်းအမြစ်ဖြစ်သော ဤစနစ်သည် လူမှုရေးအရ အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော စနစ်ဖြစ်သည်—အများစုမှာ မကြုံစဖူးကြုံစဖူးသော အသုံးပြုသူဒေတာများစွာကို စုဆောင်းပြီး ကြော်ငြာရှင်များနှင့် အခြားဝယ်ယူသူများအတွက် ထိုအချက်အလက်များအတွက် ထုပ်ပိုးနိုင်မှု——– ဆင့်ကဲသို့ "စောင့်ကြည့်ရေး အရင်းရှင်စနစ်"
ဤပလပ်ဖောင်းအနည်းငယ်သည် သတင်းအချက်အလတ်များကို ကိုင်စွဲထားသော ဤပလပ်ဖောင်းအနည်းငယ်သည် စိန်ခေါ်မှုမရှိသော ထိန်းချုပ်မှုအပေါ် မှီခိုလာမည်ကို လူအများက ကြိုမသိခဲ့ကြဘဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်လုံးများထံသို့ လက်လှမ်းမီသော လက်ချောင်းများကို နှိပ်လိုက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား စောင့်ကြည့်ခံရမည်ဖြစ်ပြီး ပဲ့တင်သံအခန်းများအဖြစ် ပေါင်းစပ်ပါဝင်လာမည်၊ ပစ်မှတ် ကြော်ငြာများ နှင့် မဟုတ်မမှန် သတင်းများ ဖြင့် ကြိုးကိုင်နေမှန်းပင် မသိ။
အဲဒါက ထုတ်လုပ်မှု ပိုင်ရှင်တွေကို ဝန်ဆောင်မှုပေးမယ့် ဖောက်သည်တွေကို ဝန်ဆောင်မှုပေးမယ့် မှားယွင်းတဲ့ စီးပွားရေးပုံစံကို ဆိုလိုတာပါ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် သတင်းဖြန့်ဝေရန် အလွန်အလုပ်မဖြစ်သော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဖြေရှင်းရန် စောင့်ဆိုင်းနေသည့် အနာဂတ်ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
'Web 3.0' သည် Web3ဖြစ်လာသည်။
Gavin Wood ၏ 2014 ခုနှစ်စာစီစာကုံးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကြုံတွေ့နေရသောအရှုပ်အထွေးမှာ ပိုမိုရှင်းလင်းလာသည်။ အဲဒါကို ကြည့်ဖို့ နည်းလမ်းသစ်လည်း ရှိခဲ့တယ်။
Blockchain နည်းပညာထောက်ခံသူများသည် ယခုအခါ ၎င်းအား ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုရှိသောအင်တာနက်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းသာမက ၎င်းတို့ကိုဘောင်ခတ်သည့်နည်းလမ်းသစ်တစ်ခုအနေဖြင့်လည်း ၎င်းကိုတင်ပြနေပါသည်။ "ယုံကြည်မှု" ၏ blockchain-centric concept ကိုအာရုံစိုက်ရာတွင်၊ ထိုအချိန်က Ethereum ကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူ Wood သည်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်း၏ထိရောက်မှုအားနည်းခြင်းကြောင့်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုချုပ်ကိုင်ခြင်းသို့တံခါးဖွင့်ခဲ့ပြီး Web 2.0 သို့တွန်းပို့ခဲ့သည် ၏ မက်တာပြဿနာ- ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောအသိုင်းအဝိုင်းများကြားတွင် မယုံကြည်မှုက လူများကို ၎င်းတို့၏ငွေကြေးဖလှယ်မှုနှင့် အဖိုးတန်သတင်းအချက်အလက်များကို အချင်းချင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသောအဖွဲ့အစည်းများအား အပ်နှင်းရန် ပို့ဆောင်ပေးသည်။ ဘဏ်များနှင့် ငွေများအတွက် အမြဲမှန်သောအရာကို အခြားတန်ဖိုးရှိသော ကုန်စည်ဖလှယ်မှုနယ်ပယ်တွင် ယခုတွေ့မြင်နိုင်သည်- ဒေတာ။
နောက်တစ်ဆင့်မှာ Ethereum ကဲ့သို့ blockchains များသည် Google ကဲ့သို့ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုရှိသော အဖွဲ့အစည်းများတွင် ယုံကြည်မှုကို အစားထိုးရာတွင် ပွင့်လင်းသော ပရိုတိုကောများနှင့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကင်းရှင်းသော တရားဝင်မှုကွန်ရက်များမှတစ်ဆင့် လဲလှယ်မှုများကို ခြေရာခံနိုင်သော “အမှန်တရား” နည်းလမ်း၏ အခြားရွေးချယ်မှုကို ပေးဆောင်ခဲ့သည်။ အဲဒါကို အောင်မြင်နိုင်ရင်၊ ငြင်းခုံမှုဖြစ်သွားတယ်၊ ဒေတာခွဲဝေမှု ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကင်းတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းတွေနဲ့ လက်ဝါးကြီးအုပ်တဲ့ ပလပ်ဖောင်းတွေကို အစားထိုးနိုင်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းပုံစံများသည် ထိုအသိုင်းအဝိုင်းများ၏ ငွေကြေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို ပေးဆောင်သည့်နေရာတွင် အက်ပလီကေးရှင်းများ ပေါ်ပေါက်လာသော်လည်း၊ "ကိုယ်ပိုင်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင် ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာ" ဟူသော အယူအဆနှင့်အညီ သုံးစွဲသူတစ်ဦးချင်းစီတွင်သာ အဆိုပါတန်ဖိုးရှိသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒေတာကို ထိန်းချုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Wood သည် Ethereum မှထွက်ခွာပြီးနောက် Parity Labs တွင် သူ၏လုပ်ငန်းကို ဤကြီးမားသော fix-the-internet ရည်မှန်းချက်အတွက် အပ်နှံခဲ့သည်။ Web3 Foundation ကို 2017 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ Web 3.0 ကို Web3အဖြစ် ထိရောက်စွာ နာမည်ပြောင်းခဲ့သည်။
လေးနှစ်အကြာတွင်၊ Web3သည် အိမ်သုံးစကားလုံးနီးပါးဖြစ်ပြီး non-fungible တိုကင်များ (NFT) ကဲ့သို့သော crypto ထုတ်ကုန်များနှင့် အများအပြားဆက်စပ်နေသဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤရည်မှန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါသလား။
ဂျူရီက ထွက်သွားပြီ။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတစ်ကြောင်းအတွက်၊ ကဲ့သို့သော Twitter ဝေဖန်ချက်များကို ဖတ်ရှုပါ။ Twitter CEO ဟောင်း Jack Dorsey ၊ Web3လုပ်ငန်းသည် အစစ်အမှန်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းထက် VC အမြတ်အစွန်းများအကြောင်း ပိုမိုစောဒကတက်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခုအတွက်၊ အကြိုက်များထံမှ ယဉ်ကျေးသော တုံ့ပြန်မှုများကို ကြည့်ပါ။ Balaji SrinivasanTwitter အသုံးပြုသူများသည် ပလက်ဖောင်း၏ “လူမှုရေးစာချုပ်များ” ကို ယုံကြည်ရန် လိုအပ်ကြောင်း Ethereum ၏ ယုံကြည်မှုမရှိသော “စမတ်စာချုပ်များ” ၏ သာလွန်ကောင်းမွန်မှုကို အမွှမ်းတင်ခဲ့သည်။
ဒါမှမဟုတ် အဲဒီမှာ Signal တည်ထောင်သူ Moxie Marlinspike (အမည်ရင်း- Matthew RosenfeldWeb3သည် crypto cheerleaders များယုံကြည်သည်ထက် အောင်မြင်ရန်ပိုမိုခက်ခဲသည်ဟု စောဒကတက်သူသည် တစ်ဦး၏ကိုယ်ပိုင်ဝဘ်ဆာဗာကိုလည်ပတ်ရာတွင် ကုန်ကျစရိတ်နှင့် လုပ်ရကိုင်ရခက်ခဲမှုများကြောင့် လူများကို ပိုမိုထိရောက်သော ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုပလပ်ဖောင်းများသို့ ထိန်းချုပ်မှုကို ရွှေ့ဆိုင်းရန် သဘာဝကျကျပို့ဆောင်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဲဒါက တစ်ခု သိမ်မွေ့သောတုံ့ပြန်မှု Bitcoin ၏ SPV (ရိုးရှင်းသောငွေပေးချေမှုအတည်ပြုခြင်း) ပိုက်ဆံအိတ်များကို သမာဓိထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် အချက်အလက်ကိုထိန်းသိမ်းထားစဉ်နှင့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသောဆာဗာများကို မှီခိုခြင်းမှရှောင်ရှားနိုင်သည့် ပေါ့ပါးသောအသုံးပြုသူထိန်းချုပ်ထားသောဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခု၏ဥပမာအဖြစ် Bitcoin core developer ဖြစ်သူ Mike Hearn ထံမှ သိရသည်။
နှစ်ဖက်စလုံးက ခိုင်လုံတဲ့အချက်တွေကို လုပ်တယ်။ သေချာတာတစ်ခုကတော့ The Matrix ကို လွတ်မြောက်ဖို့ ကျွန်တော်တို့မှာ ခရီးဝေးကြီး ကျန်နေပါသေးတယ်။ Blockchain ၏ "ယုံကြည်မှုမရှိသော" လဲလှယ်မှုပုံစံများသည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအဖွဲ့အစည်းများ (DAO) ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သကဲ့သို့ စုပေါင်းလုပ်ဆောင်မှု၏စွမ်းအားသည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသောပလပ်ဖောင်းများ၏ ကွန်ရက်အကျိုးသက်ရောက်မှုဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများကို ကျော်လွှားနိုင်စေမည့် ပြုပြင်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ဒါပေမယ့် အများကြီးပိုလိုအပ်ပါတယ်။ O'Reilly သည် ၎င်း၏ မကြာသေးမီက ဆောင်းပါးတွင် ငြင်းဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း Web3သည် ၎င်း၏ "စိတ်ကူးယဉ်ဝါဒ" ကို ကျော်လွန်ပြီး "ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကင်းစင်သော ယုံကြည်မှုအတွက် ယေဘူယျစနစ်တစ်ခု ဖြစ်လာပါက၊ ၎င်းသည် လက်တွေ့ကမ္ဘာ၊ ၎င်း၏တရားဝင်စနစ်များနှင့် လည်ပတ်ဆောင်ရွက်မှုတို့နှင့် ခိုင်မာသော အင်တာဖေ့စ်များကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ စီးပွားရေး။”
ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတာက လူတွေက ဒီလိုတံတားတွေဆောက်တာ။ ဝယ်လိုအားက သူတို့ကို မောင်းထုတ်လိမ့်မယ်။ တစ်ချက်မှာ၊ NFT နှင့် အသွင်အပြင်စက်မှုလုပ်ငန်းသို့ ပင်မရေစီးကြောင်း၊ ရှေ့နေထိန်းချုပ်ထားသော မီဒီယာကော်ပိုရေးရှင်းများ၏ ဝင်ပေါက်သည် ဤပုံမှန်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အင်္ဂါရပ်များကို တည်ဆောက်ရန် တောင်းဆိုမည်ဖြစ်သည်။ သို့တိုင် O'Reilly ၏အချက်အတွက်၊ blockchain နှင့် crypto သည်တစ်ကိုယ်တော်ဖြေရှင်းချက်မဟုတ်ပါ။ အခြားသော အစိတ်အပိုင်းများစွာ လိုအပ်ပါသည်။
ဤနေရာတွင် ပန်းတိုင်ကို မမေ့ပါနှင့်- လူသားမျိုးနွယ်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Web 2.0 ညစ်ညမ်းခြင်းမှ လွတ်မြောက်ရန် နည်းလမ်းတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ Web3တည်ဆောက်သူများ ဆက်လက်ကြိုးစားပါ။